Dhegayso: Xiisad iyo Khilaaf ka taagan doorashada xubnaha gobolada waqooyi - Hablaha Media Network
Dhegayso: Xiisad iyo Khilaaf ka taagan doorashada xubnaha gobolada waqooyi
HMN:- Muran iyo khilaaf xoogan ayaa ka taagan dhameystirka xubnaha aqalka sare u matalaya deegaanada gobolada waqooyi ee dalka Soomaaliya.
Jaamac Xasan Qaalib, guddoomiyaha guddiga doorashada xubnaha Somaliland matalaya ayaa sheegay in khilaafka uu ka dhashay doorashada iyo musharixiinta xildhibaanada aqalka sare u matalaya Somaliland.
Sidoo kale wuxuu sheegay in khilaafka ugu daran uu ka yimid sidii loo qeybsan lahaa shanta kursi ee ka harsan aqalka sare.
HALKAN KA DHEGAYSO KHILAAFKA TAAGAN DOORASHADA
Wuxuu sheegay in beelaha kasoo jeeda deegaanada Somaliland ee xubnaha ka helay aqalka hoose ee baarlamaanka inay doonayaan inay markale xubno ku yeeshaan aqalka sare, taasi oo murunka ugu weyn keentay.
Doorashadaasi ayaa la filayaa inay magaalada Muqdisho ka bilaabato marka la dhameeyo khilaafka hadda taagan.